MAXAA LAGA FILAYAA GOLE DUQAYDIISII DURDURINAYSO! – hogaanka.org
Waxaa aan qalinkayga ku ilaaliyaa umadeydan aan garaneynin dantooda,balse sida indha la’aanta ah wax ku cabireysa qabyaalada,waayo waxaa aan rabaa in aan ka ilaaliyo khaladkii hore oo sababey in khayraadka Allah(swt) ku maneystey ay ka baahan yihiin,ka kabo la yihiin kana faa’iideystaan dad magacooda matalaya muuqoodana leh.
Waa arin laga xumaado in golaha wakiilada Somaliland u dhaqmaan si aan waafaqsaneyn anshaxa iyo shuruucda dalka,waana Ayaan daro in dadkii inaga wakiilka ahaa noqdaan kuwo aad moodo in ay sharciga ka sareeyaan dalkana dhaxal u heleen ama boqortooyo yihiin, waxaa iska cad in aaney jirin xaq dhawr iyo ixtiraam ay u hayaan dadka iyo dalka,waxaa iska cad in khaladka ay galaan aaney ka baqaynin in lagula xisaabtamo.
Waxaa aan sidaa u lee yahay sababahan:
Doorashada cidii ku guuleystay iyo cidii laga guuleystayba halkan kaga hadli mayo waayo waa arin laysku hayo oo wakhtigeeda leh.
Balse waxaa ka hadlayaa hab dhaqanka golaha tusaale waxaa u soo qaadanayaa dhacdadii shalay eek a dhacdey golaha, oo u muuqatey mid aan loo baahneyn sabahan awgeed:
Xildhibaan Saleebaan Cali Koore hadii uu cabasho ka qabo doorashadii waxaa u furnaa in uu jidka sharciga u maro waayo dalka sharcigiisa ayaa cid walba ka sareeya isaguna wuxuu ka mid yahay xeer dejiyaasha dalkan markaa shuruucda dalka miyaanu ixtiraameynin.
Mudane Xildhibaan Saleebaan Cali Koore wuxuu muujiyey in uu adeegsado xoog ama hanjabaado iyo caga jugleyn uu kula kacay xildhibaano sida Xildhibaan Nacnac oo sheegay inuu cunaha qabtey, arintaasina waa mid sharciga baal marsan.
Xildhibaan Saleebaan Cali Koore ragii la socdey ayaa mid ka mid ahi bastoolad la soo baxay oo xabad ridey baa laynoo sheegay taasina waa arin khatarteeda leh oo amaankii golaha khatar lagu geliyey waxaana dhici gaadhey in nefo adami ku baxaan , dhimasho ka dhacdo humaag u muuqata kursi doon uun ama aan ka fogeyn,balse qaab kale oo shaci ah loo xalili karayey.
Dhacdadan waxaa waajib ku ah dhamaan xisbiyada siyaasada musharixiinta u tartamaya madaxtooyada in ay cambaareeyaan waayo waa ficilo lid ku ah nidaamka dawladnimo.
Waxaa khalad iyaduna ah in Xildhibaan cabdiraxman tayanle iyo saaxibadii soo badhigaan warbixin ku saabsan sidii codku u dhacay oo muuqaal ah waayo kol hadii la rabo in si sharci ah loo maro qaabkii ay doorashadu u dhacdey kolka ugu horeysa waa in aan laga hor dhicin baadhitaanka lagu sameenayo arinta,waxaana loo baahan yahay inarinta loo dhaafo haydaha ku shaqada leh ee qaranku u xilsaarey arimaha noocaa ah.Mudane cabdiraxmaan Tanyanle isagu wax dhiba oo uu ilaa hada geystey ma jirto oo aan ahayn in uu sheegtey uun in uu isagu ahaa shaqsiga ku guuleystey codkii hal dheeriga ahaa,balse sida kale waxaa uu ku amaanan yahay in dulqaad u yeeshay xaalada.
Ugu dambeyntii Mudane Cabdiraxmaan iyo cid kasta oo wadankan lexe-jaclo ka qabta waa in danta guud ee qaranka ka hormarisaa kursi iyo wax la mida. Ma lihi Cabdiraxmaan xaqdaro ha lagugu sameeyo anigu ma cadeynayo cida ku guuleysatey tartanka iyo cida laga guuleystey balse waxaa aan ujeedadeydu tahay in aan cadeeyo in jidka aad u mureyso xuquuqdaadu noqonin mid aad garab marto shuruucda golaha iyo kan qarankaba balse aad wax ku raadisid nidaamka kuu saamaxay inaad wakiil naga noqoto. Mahadsanidiin dhamaantiin,Allah(swt) ayaa ay u sugnaatey mahad dhamaanteed
QAABKA AYNU U SEEXANO IYO SAAMEYNTA CAAFIMAADKEENA Previous
QAABKA AYNU U SEEXANO IYO SAAMEYNTA CAAFIMAADKEENA Q.2aad Next